DOZIE WINDOWS 10 BOOTLOADER: ESI EME YA N'ONWE GỊ MA Ọ BỤ WEGHACHI YA NA AKPAGHỊ AKA - WINDOWS - 2019
Ihe kpatara nsogbu na Windows 10 bootloader
Weghachite bootloader na-akpaghị aka
Video: megharia Windows 10 bootloader
Iji aka naghachi azụ loader
Iji bcdboot utoo
Video: nzọụkwụ site nzọụkwụ mgbake nke Windows 10 bootloader
Ịhazi ụda zoro ezo
Video: bootloader usoro mgbake maka ndị ọrụ dị elu
Tupu ị gaa n'ihu na mweghachi nke Windows 10 sistemụ arụmọrụ, ọ bara uru ịchọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ. E kwuwerị, ọ ga-ekwe omume na nsogbu ahụ ga-apụta ọzọ, n'oge na-adịghịkwa anya.
Ihe kachasị kpatara nsogbu ọdịda akpụkpọ ụkwụ bụ itinye os nke abụọ. Ọ bụrụ na a emeghị nke a n'ụzọ na-ezighi ezi, a pụrụ imebi ntuziaka maka ịdebe Windows 10. N'ikwu okwu n'ụzọ dị mfe, BIOS adịghị aghọta: a ga-eburu OS nke mbụ. N'ihi ya, ọ dịghị buut.
Onye ọrụ nwere ike ịkọ ma ọ bụ jiri akụkụ nke diski ike nke echekwara na usoro. Iji nweta akụkụ nke a, achọrọ software ọzọ ma ọ bụ ihe ọmụma pụrụ iche. Ya mere, ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe a na-ekwu, nke a abụghị ihe kpatara ya.
Windows 10 loader nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ nke ọma mgbe usoro mmemme ọzọ ma ọ bụ ọdịda nke ụlọ.
Gọranụ ma ọ bụ ngwanrọ nke atọ nwere ike ịme ka ọkpụkpụ ebu ibu ghara ịrụ ọrụ.
Ngwá ọrụ ngwaike komputa nwere ike iduga ọnwụ data usoro. N'ihi nke a, onye na-arụ ọrụ na-akwụsị ịrụ ọrụ n'ihi na faịlụ ndị dị mkpa ga-efu.
Mgbe mgbe, ịrụzi Windows 10 bootloader dị mfe. Usoro ahụ bụkwa otu.
Nsogbu diski - nsogbu nwere ike ịkpata nsogbu na bootloader
Nsogbu kachasị njọ bụ ihe ikpeazụ dị na ndepụta ahụ. N'ebe a, anyị na-ekwukarị banyere malfunction teknụzụ nke disk diski. Ihe ọ pụtara bụ na ọ na-apụ. Nke a na - eduga na mpempe akwụkwọ ọjọọ - "ajọ" disk ngalaba, nke data na-anụ ahụ agaghị ekwe omume ịgụ. Ọ bụrụ na n'otu n'ime ngalaba ndị a, enwere faịlụ ndị dị mkpa iji bulie Windows, usoro ahụ, n'ezie, agaghị enwe ike ịkpụ.
N'okwu a, ihe ngwọta dị mma bụ ịkpọtụrụ onye ọkachamara. Ọ nwere ike weghachite data site na ihe ọjọọ na ọbụna rụkwaa diski ike maka oge, ma n'oge na-adịghị anya, ị ga-emerịrị ya.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-enwe ike ịchọpụta nsogbu ndị akọwapụtara naanị mgbe ebughachi batrị ahụ dịghachi. Ya mere, anyị na-aga n'ihu na-edozi nsogbu a.
N'agbanyeghị ihe PC / laptọọpụ PC, BIOS mbipute ma ọ bụ faịlụ faịlụ, e nwere ụzọ abụọ iji dozie Windows 10 bootloader: na-akpaghị aka na aka. N'okwu abụọ ahụ, ịkwesiri ịkpụ ma ọ bụ USB-ụgbọala na sistemụ arụmọrụ kwesịrị ekwesị na ya. Tupu ịmalite ụzọ ọ bụla, jide n'aka na ọ dịghị ihe mgbochi ndị ọzọ na-etinye n'ime njikọ USB, ụgbọala ahụ adịghịkwa efu.
N'agbanyeghị ụdị obi mgbagwoju anya nke ndị ọrụ dị elu na ụlọ ọrụ na-akpaghị aka, ngwa ngwa bootloader Microsoft gosipụtara onwe ya nke ọma. N'ọtụtụ ọnọdụ, enwere ike iji ya mee ngwa ngwa dozie nsogbu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike disk / disk, ọ dị ha mkpa ka ha kee kọmputa.
Tinye BIOS ma nyezie buut site na mgbasa ozi kwesịrị ekwesị.
Na windo na-egosi, pịa bọtịnụ "Weghachite System" (n'okpuru).
Pịa na "Nweghachi System" iji mepee menu weghachite.
Na menu na-emepe, pịa "Nchọpụta nsogbu", wee pịa "Iweghachite mmalite". Mgbe ị na-ahọpụta os, mgbake ahụ ga-amalite.
Gaa na "Nchọpụta nsogbu" ka ịmezie ịhazi mgbake
Mgbe usoro mgbake ahụ gasịrị, PC ga-agbanyeghachi ma ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma. Ma ọ bụghị ya, ozi na - egosi na usoro nkwụghachi ahụ adaghachi. Gaa na usoro ọzọ.
Iji aka weghachite usoro bootloader, ị ga-achọkwa diski / flash drive na Windows 10. Tụlee ụzọ abụọ nke gụnyere iji akara iwu. Ọ bụrụ na ịnweghị ya na mbụ, kpachara anya ma tinye naanị iwu ndị dị n'okpuru ebe a. Omume ndị ọzọ nwere ike ịkpata ọnwụ data.
Wụnye boot si flash drive / floppy drive. Iji mee nke a na menu BIOS, gaa na ngalaba Boot na na ndepụta nke ngwa bat, tinye usoro mgbasa ozi ziri ezi na mbụ.
Na windo nhọrọ asụsụ nke na-egosi, pịa Mgbanwe + F10. Nke a ga-emeghe iwu ozugbo.
Nbanye ịbanye usoro iwu (na-enweghị ọnụego), na ịpị bọtịnụ Tinye mgbe ọ bụla: kpochapụ, depụta ọnụego, wepu.
Mgbe ịbanye na iwu ndị na-adịghị ahụkebe nke abamuru ahụ, ndepụta ndepụta dị.
Ndepụta mpịakọta na-egosi. Cheta akwụkwọ nke aha olu ebe a na-arụ ọrụ.
Tinye iwu "bcdboot c: windo" na-enweghị ruturu. Lee c bụ akwụkwọ ozi si os.
Ozi na-egosi banyere ihe okike ntụziaka.
Gbalịa gbanyụọ ma gbanye kọmputa (echefula iji gbanyụọ njigide site na USB flash drive / disk na BIOS). Ikekwe usoro ahụ agaghị ebu ngwa ngwa, mana ọ bụ naanị mgbe ị gachara.
Ọ bụrụ na ịnweta njehie 0xc0000001, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ọzọ.
Tinyegharịa nzọụkwụ 1 na nke 2 nke usoro mbụ.
Dịrị ụdị, wee depụta olu.
Lee ndepụta nke mpịakọta. Ọ bụrụ na a haziri usoro gị dị ka ọkọlọtọ GPT, ị ga-ahụ mpịakọta zoro ezo n'enweghị akwụkwọ ozi na FAT32 file file (FS) na olu site na 99 ruo 300 MB. Ọ bụrụ na ejiji MBR, a ga - enwe olu na NTFS ruo 500 MB.
N'okwu abụọ ahụ, cheta ọnụ ọgụgụ nke olu a (dịka ọmụmaatụ, na nseta ihuenyo bụ "Mpịakọta nke 2").
Cheta ọnụ ọgụgụ nke olu zoro ezo na kọlụm "Mpịakọta ###"
Ugbu a, cheta akwụkwọ mpịakọta nke ebe a na-arụ ọrụ (dịka e mere na mbụ usoro). Gbalịa tinye iwu ndị na-esonụ n'enweghị utu aha:
họrọ olu N (ebe N bụ ọnụ ọgụgụ zoro ezo);
ụdị fs = fat32 ma ọ bụ usoro fs = ntfs (na-adabere na faịlụ faịlụ nke olu zoro ezo);
kenye leta = Z;
bcdboot C: Windows / s Z: / f ALL (ebe a C bụ akwụkwọ mpịakọta nke etinyere usoro ahụ, Z bụkwa akwụkwọ mpịakọta zoro ezo nyere na mbụ);
họrọ olu N (ebe N bụ ọnụ ọgụgụ nke zoro ezo nke e kenyere leta Z);
wepu leta = Z;
Degharịa kọmputa. Ọ bụrụ na usoro a enyereghị gị aka, kpọtụrụ onye ọkachamara. Ọ bụrụ na enweghị ozi dị mkpa na diski usoro, ị nwere ike ịtinye Windows.
N'agbanyeghị ihe kpatara ọdịda nke Windows 10 bootloader, ụzọ ndị a kwesịrị idozi ya. Ma ọ bụghị ya, reinstalling Windows ga-enyere aka. Ọbụna mgbe kọmputa ahụ dị ngwa ma ọ bụ nsogbu ahụ na bootloader na-apụta, mgbe ahụ akụkụ ya (na-abụkarị diski ike) ezughị oke.